Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iindaba » Akukho Gorha lishiyekileyo ngolu suku lokhenketho lwehlabathi lowama-2021
Ukhenketho olufikelelekayo • IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Iindaba zeManyano • Awards • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • Education • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • Iindaba zeMpilo • I-ICTP • udliwano • iindaba • abantu • Cinezela iZaziso • Ukwakha kwakhona • Xanduva • News Sustainability • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • I-WTN
Uthungelwano lwezoKhenketho lweHlabathi luneenyanga ezili-18 kuphela ubudala, kodwa iinkokeli ezintsha ziyavela kushishino lwezohambo nokhenketho lwehlabathi.
Uninzi lwazo luchongwe njengamaqhawe okwenyani okhenketho yiWorld Tourism Network - kodwa ngoobani?
The Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi (WTN) inamalungu kumazwe ali-128 kwaye yavela kwi ukwakha kwakhona ingxoxo.Heroes.travel yinkqubo yokunikezelwa simahla kunye nenkqubo yokwamkelwa yi-WTN iwonga abo benze umahluko.
Ngokwe-UNWTO, olu Suku lwezoKhenketho lweHlabathi lowama-2021 lumalunga nokubandakanywa kukhenketho. I-WTN iqinisekisa ukuba oku kubandakanya onke amaqhawe angenamagama.
Amaqhawe okwenene ngalawo ayengenamashishini ngexesha lobhubhane kwaye asakholelwa kushishino lokhenketho nokhenketho. Eli qela elingaziwayo linikezelwe Ibhaso leQhawe lezoKhenketho. yiNethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi namhlanje.
”Amaqhawe okwenyani entliziyweni yam ngaphandle kwemisebenzi iinyanga ezili-18 kwaye asinda.
Nokuba azibonakali kangakanani-ziphakathi kwethu, kodwa azinakuba nelizwi. Ndifuna ukuba basimamele, beze ngaphambili, ukuze sibaqhwabele izandla ngokusinda nokuqhubeka nokuphila, kwaye babeyinxalenye yomzi mveliso wethu omkhulu. USuku loKhenketho lweHlabathi lowama-2021 belumalunga nokubandakanya bonke abantu, kwaye eli qela kufuneka libandakanywe. ” utshilo uMarikar Donato, ongumququzeleli womsitho woSuku lweHlabathi lezoKhenketho kwi-WTN kunye neqhawe kwezokhenketho ngokwakhe.
Uye wongeza wathi: "Kukho amawaka amaqhawe ezokhenketho angaziwayo."
UMseki kunye noSihlalo weWorld Network Network wongeze: Ndiyazingca ngeMarikar ukuza nembasa yeAnonomyous Tourism Hero, eyokuqala kweli hlabathi.
Kuyangxamiseka, siyawaqonda la maqhawe angaziwayo. I-Ther ikhona kuyo yonke indawo.
Ngamanye amaxesha siyazi ukuba ngoobani la maqhawe. Sasiba nemeko abantu bengafuni ukuba kuthiwe ngamagorha. Baziva ukuba akufuneki babelane noluntu.
Ndinovuyo ukwazisa, i Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi ngumbutho wokuqala wokhenketho wehlabathi oqonda imfuneko yokubeka la maqhawe angaziwayo kwindawo ephambili.
The Ibhaso leqhawe elingaziwayo kwezokhenketho yongezwa ngokusemthethweni kwi ukuhambahamba ipotifoliyo.
Umseki we-WTN uGqirha Peter Tarlow uvumile wathi:
“Ezokhenketho zenziwa ngamawaka abantu abathi ngokungazingci benze ubudlelwane phakathi kwabantu, iinkcubeko neentlanga.
Ezi nkwenkwezi zokhenketho ngamagorha emizi-mveliso angaziwayo azisa ukukhanya kwihlabathi eligcwele ubumnyama.
Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi ifuna ukwazisa la maqhawe ezokhenketho. Njengokuba uGqirha uPeter Tarlow, ofunyenwe ekwi-World Tourism Network ethe: “ukhenketho lungaphezulu kweshishini nje, luyindibaniselwano yepragmatic nezinto zokomoya, ukusebenzisana kwemiphefumlo nalo mhlaba uyinyani.
Amagorha ezokhenketho ngabo bahlanganisa imilinganiselo yokuziphatha kunye nokuxuba ubuntu bethu nehlabathi lokuhamba ”UTarlow usikhumbuza ukuba amaqhawe ezokhenketho amele awona mahle kuthi sonke kwaye ukufunda ngamntu ngamnye luhambo oluya kubunzulu bobuchule kunye nokukhathalela. ”
UMarikar Donato sisikhokelo seWashington DC soKhenketho kunye nolawulo kwihlabathi Umbutho woMbutho wabakhokeli babakhenkethi (WFTGA)
Namhlanje uthungelwano lwezoKhenketho lweHlabathi lubhiyozele namaqhawe alo awaziwayo. Wonke umntu oligorha elaziwa yi-WTN wenze into engaphaya kokulindelweyo kukuhamba kwesibetho se-COVID-19.
UGqr Taleb Rifai, owayesakuba ngu-Nobhala-Jikelele we-UNWTO wamkela amaqhawe ekhaya lakhe eJordani. IQhawe lezoKhenketho uMary Rhodes, Umongameli we-Guam Hotel & Restaurant Association uvuke ngentsimbi yesi-4 kusasa ukuba aye kulo msitho wokusondeza umhlaba kunye namaqhawe kwilizwekazi liphela.
UGqr. Walter Mzembi, Owayengumphathiswa wezoKhenketho ovela eZimbabwe walumkisa eli hlabathi livaliwe, kwaye izikhombisi zelinye icala ziyayitshabalalisa indlela yamazwe amaninzi iinkokheli zokhenketho ezilwe iminyaka engama-20.
UAlain St. Ange, umongameli we IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika, nowayengumphathiswa Wezokhenketho waseSeychelles babenomyalezo wobumbano kwiAfrika.
UAleksandra Gardasevic Slavuljica, Umlawuli wezoKhenketho kolu hlanga lweBalkan wayeyinxalenye ye-WTN kwasekuqaleni. Wenziwa iqhawe lezokhenketho ngendima yakhe ekuziseni ummandla weBalkan kunye. Wayexhaswa ngu IQhawe lezoKhenketho uKlodiana Gorica, uNjingalwazi opheleleyo kwiYunivesithi yaseTirana, iFakhalthi yezoQoqosho, eAlbania.
Yiva kwi UGqr Snežana Štetić unayo usebenze kwezoKhenketho nakwimfundo yoKhenketho ngaphezulu kweminyaka engama-40 kwaye uyintloko yeqela elinomdla kwezemfundo, kunye nokukhokela kwinqanaba eliphezulu leBalkan Group yeWorld Tourism Network.
UDeakak Joshi, igorha lezokhenketho laseNepal, kunye nowayesakuba yi-CEO yeBhodi yoKhenketho yaseNepal banike ingxelo yakhe ngokuvulwa kwakhona kwezokhenketho kwingingqi yeHimalaya.
UNjingalwazi Geoffrey Lipman weSunX kunye Ubambiswano lweMozulu yeHlabathi kunye nezoKhenketho (ICTP) ukhumbuze umhlaba ngesoyikiso sokutshintsha kwemozulu.
IQhawe lezoKhenketho UMouhamed Faouzou UKUMISELWA ovela eSenegal wabelana ngomyalezo wethemba, ukuzithemba, kunye nenkuthazo kwilizwe lezokhenketho. Ukwangunozakuzaku weBhodi yoKhenketho yase-Afrika, kunye noMcebisi ngezoBuchwephesha kuMphathiswa wezoKhenketho kunye noThutho loMoya eSenegal.
IQhawe lezoKhenketho kunye neCEO ye Iqela elilandelayo le-LLC eAzerbaijan, U-Efsun Ahmadov, Baku, eAzerbaijan Ndiziva ndibhetele emva kwetyala elibi le-COVID.
Igorha lezokhenketho UDiana McIntyre-Pike unike ingxelo ngentsebenziswano yakhe entsha neqhawe lezokhenketho uEdmund Bartlett, umphathiswa wezokhenketho eJamaica. UDiana ligorha lezokhenketho nenkokeli kwezokhenketho kuluntu eJamaica.
Amaka Amatokwu-Ndekwu, Lagos, Nigeria ungumququzeleli woMbutho wase-Afrika wabaseTyhini kwezoKhenketho noKubuka iindwendwe eNigeria. Uhlala zombini eMelika naseNigeria.
Igorha lezoKhenketho uJoseph Kafunda nguSihlalo woMbutho wamaShishini aKhulayo aKhulayo kwaye ulilungu loMnatha woKhenketho weHlabathi ozinze eNamibia. Wajoyina esuka eBotswana.
Ugqirha Peter Tarlow, umseki kunye neWorld Tourism Network uwugqibile umsitho ngomthandazo weenkolo ezininzi.
Akukho zindleko zokutyumba okanye ukufumana amaHero ngamaNethiwekhi oKhenketho lweHlabathi. Kuthatha ubuncinci amagama atyunjiweyo azimeleyo ukuba athathelwe ingqalelo kweli bhaso. Ulwazi oluthe kratya kwi www.